Fiara sprinter iray indray no nivadika ny atoandron’ny alarobia lasa teo, tany amin’ny 7 km tsy hidirana an’Isalo any, Ranohira. taksibrosy feno mpandeha niainga teto Antananarivo hihazo an’i Toliara, faritra Atsimo ity fiara ity raha ny vaovao azo. Tsy fantatra mazava moa izay antony nahatonga ny loza na noho ny lalana malama nateraky ny ranon’orana na noho ny olana ara-teknika teo amin’ny fiara. Ankoatra ny fahasimban’ny lalana dia zaza iray tsy manan-tsiny vao 10 volana monja no namoy ny ainy. Maro ihany koa ireo naratra ka anisany ny ray aman-drenin’ilay zaza maty. Mila mitandrina hatrany ny mpampiasa lalana amin’izao fotoanan’ny vakansy lehibe izao. Misy amin’izy ireny mantsy no tsy za-dalana ankoatra ireo mandeha mafy.